Myat Shu - သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
You are here : Myat Shu » Archives for သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
Published By Myat Shu On Sunday, November 6th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်
တလောက အင်တာနက်မှ 'The Bang Bang Club' ဟူသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ကြည့်ရပါသည်။ လူမျိုးစု ပဋိပက္ခဖြစ်နေသော တောင်အာဖရိကတွင် စွန့်စွန့်စားစား သတင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူကြသော ဓာတ်ပုံသတင်း ထောက်များ အကြောင်းဖြစ်သည်။ အရိုးပေါ်အရေတင် ပုံလဲကျနေသော ကလေးတစ်ယောက်ကို ခပ်လှမ်းလှမ်းက လင်းတတစ်ကောင် စောင့်နေသည့် နာမည်ကြီး သတင်းဓာတ်ပုံလည်းပါသည်။ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပျက်သည့် ကာလ က ၁၉၉၄ ဟုပြထားရာ ထိုအချိန်က လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုများဖြစ်ခဲ့သော ရ၀မ်ဒါ နှင့်အတူ 'Hotel Rwanda' (2004) ဇာတ်ကားထဲမှ ဟိုတယ်မန်နေဂျာနှင့် ရုပ်သံသတင်းထောက်တို့ စကားပြောခန်းကို သတိရမိပါသည်။ ရ၀မ်ဒါတွင် တွတ်ဆီနှင့် ဟူတူလူမျိုးစုအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပြီး သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြရာ သတင်းမှတ်တမ်းရိုက်ယူလာသူ ရုပ်သံသတင်းထောက်နှင့် ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ... Continue Reading
မကြည့်စကောင်း ကြည့်စကောင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ရှင်အကြောင်း (အပိုင်း ၅)
Published By Myat Shu On Monday, October 3rd 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, အမှတ်တရ
မကြည့်ကြတော့တဲ့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားသော ဘ၀များ….. ၁။ ဝေဖန်လို့လေကန်ရင်း ဝေးသွားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင် ကျနော်ငယ်ငယ်က နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ် ရှိပါတယ်။ “ရုပ်ရှင်သွားzို့ အလှပြင်ရန်ပင် မှန်တင်ခုံနှင့် ကျမ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကိုယ်ဟန်ကျော့ကျော့ မော့မော့လေးထိုင်… တို့ပတ်ကလေးနဲ့ ဘီးကလေးတကိုင်ကိုင်… ရုပ်ရှင်ချိန် နီးသည့်အခါတိုင် ကျမကလဲ မပြီးသေးပါနိုင်….. လာစမ်းပါအုံး မောင်ရဲ့ ပျိုချစ်တဲ့သက်ပိုင် … သက်ပိုင် အပြာရောင် ဆွယ်တာလေး ရှာပေးစမ်းပါ့ ချစ်တဲ့သူကေခိုင်” ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ခါနီး အလှပြင်နေတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ချိန်နီးတာတောင် အလှပြင်မပြီးနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးကို လှပစွာ ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ မြန်မာသံစဉ်သီချင်း လေးပါ။ သီဆိုသူကတော့ မြင့်မြင့်စိန်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်တပုဒ်ကတာ့ စတီရီယိုသီချင်း နာမည်ကြီးတာလေးပေါ့၊ “ကြာတယ် ... Continue Reading
မကြည့်စကောင်း ကြည့်စကောင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ရှင်အကြောင်း (အပိုင်း ၃)
Published By Myat Shu On Monday, September 19th 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, အမှတ်တရ
ခေတ်ကောင်းချိန်နဲ့ တောက်ပခဲ့သော ကြယ်ပွင့်များ ကျနော်တို့ လူပျိုပေါက်စအရွယ် ရောက်တော့ နောင်တစ်ချိန် မြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာ ဂုရုကြီးတစ်ပါး ဖြစ်လာမယ့် ကျော်ဟိန်း ပေါ်လာပါတယ်။ သူ့နဲ့လက်တွဲဖော် ဖြစ်လာမယ့် စန္ဒာနဲ့ တွဲဖက်လို့ နုနုငယ်ငယ်နဲ့ ဖူးစာလမ်းဆုံဇာတ်ကားကနေ အစပြုလိုက်တာ အောင်မြင်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ကောက်ကွေးသလို လူကလည်း တွန့်လိန်ကောက်ကွေးပြီး သရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ ကျော်ဟိန်းကို လူငယ်များက နှစ်သက်ပေမယ့် လူကြီးအများစုကတော့ သရုပ်ပျက်တယ်ဆိုပြီး ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျော်ဟိန်းက သီချင်းဆိုတာ ၀ါသနာပါ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသံတော့ သိပ်မကောင်းဘူး။ “ချစ်သလား မုန်းသလား ပြောပါလား မုသား မသုံးသင့်ဘူး …. လူသား လကမ္ဘာရောက်တာလဲ တစ်ခေါက် မကတော့ဘူး ….”ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ ... Continue Reading